Daily Yoga | Fitness Yoga Plan&Meditation App အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Daily Yoga | Fitness Yoga Plan&Meditation App
🏆Google Editor ကိုChoice🏆
🧘♀️အားလုံးအတန်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဗီဒီယိုများမှတဆင့် Professional ကယောဂနည်းပြကတီထွင်နေကြပါတယ် Play ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Pocket ယောဂနည်းပြ! 🧘♂️
သင် DailyYoga အပေါ်သင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင်လေ့ကျင့်ယောဂအဘယ်အမျိုးအစား, အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ သငျသညျကြာချိန်, အဆငျ့, ရည်မှန်းချက်နှင့်ယောဂစတိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
💪Dailyအကူအညီနဲ့အသုံးပြုသူများယောဂမျှော်လင့်ချက်ဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့နှင့်မသေချာမရေရာအချိန်ကာလအတွင်းအပြုသဘောမစောင့်, Keep ယောဂ Keep မထိုက်မတန်နှင့်အဆင့်မြင့်
🆕အပြီးအစီး Beginner စောင့်ရှောက်ရန် App ကိုသင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်အတန်းသို့ရေငုပ်မတိုင်မီအခြေခံသင်ယူစီးဆင်းအကူအညီနဲ့မှအမျိုးမျိုးသောပဲ့ထိန်းအတန်းကိုထောက်ပံ့ပေး, သင်နေတဲ့အဆင့်မြင့်-နေ့စဉ်ယောဂသည်လည်းသင်တို့အဘို့အတဲ့ professional ယောဂ App ကိုလျှင်, သင်နောက်ဆက်တွဲချင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆရာ, ဆရာမများ၏ပဒေသာရှိပါတယ် အတူ။
? နေ့စဉ်ယောဂသင်အိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်ဖို့အတှကျအညာဘက်ကိုရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါတယ်။ အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အဆင့်အတန်းကို Download လုပ်ပါနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တို့နှင့်အတူရှိကယူပါ! သင့်ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာဟိုတယ်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေအပေါ်အလေ့အကျင့်။ အချိန်မရွေးဝတ်စုံကိုထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကိုယ်အလေးချိန်အဖြစ်ပစ်မှတ် yogis ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အ Daily သတင်းစာယောဂကမ်းလှမ်းမှု 500 Asana ဟာ, 1000 ပဲ့ထိန်းယောဂပိလတ်မင်း, ဘာဝနာအစီအစဉ်များကိုပေါင်းအကြီးဆုံးယောဂ pose စာကြည့်တိုက်
🎯Fitသင့်ရည်မှန်းချက် , ဆန့်လျက်, အပေါ်နိုင်အောင်။ သငျသညျနေ့စဉျနေ့ယောဂနှင့်အတူနေဖို့ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသငျ့စိတျနဲ့ကိုယျခန်ဓာနှစ်ခုလုံးအတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများပေးစွမ်းသည်။
👩🏫 Follow ကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကိုမာစတာစုစုပေါင်းတကမ္ဘာလုံးလေးစားဒါမှမဟုတ်သူ 40 ယောဂနည်းပြ
မသာ ယောဂစတိုင်များ၏စတငျကိုယ်အလေးချိန်, အဆင့်မြင့်ဖို့အစပြုသူ, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်း & လျှော့ပေါ့အပြည့်အဝ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ယောဂအာရုံစိုက်ပါ။
👬အဝန်းလှုံ့ဆျောမှု App ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းယောဂအသိုင်းအဝိုင်းရှိပါတယ် -Daily ယောဂ
ပူနွေးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယောဂချစ်သူများအရေအတွက်။ ဒါဟာပိုမိုနီးကပ်စွာအချင်းချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအားလုံးထံမှ Yogi တတ်၏။
-Join ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယောဂစိန်ခေါ်မှု။ သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်အတွေ့အကြုံကိုဆွေးနွေးရန်ဤနေရာတွင်ကိုစုသိမ်းနှင့်ရွေးချယ်ထားချက်ပြုတ်နည်းများအညီအလေးချိန်-ထိန်းချုပ်မှုအစားအစာများ ပြင်ဆင်. , သူတို့ရဲ့နည်းစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ယောဂသိကောင်းစရာများလိုက်နာပါ။
-Never အထီးကျန်ခံစားရတယ်, သင်န်းကျင်ကတခြားလှုံ့ဆော်မှု Yogi ပိုမို limber ဖြစ်လာသည်။
📅ကို default အစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြဖို့မများကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကယောဂ Plan ကို
Do Create? သင်သည်သင်၏ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
-Private ယောဂအစီအစဉ်ကို7ရက်အတွင်းတစ်သံသရာဖြစ်ပါတယ်။
- သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီတစ်ဦးချင်းစီယလေ့ကျင့်ခန်းနေ့ယောဂအစည်းအဝေးများပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကောင်းစွာသင့်ခန္ဓာကိုယ်သိလျှင်, ကသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုထိရောက်စေရန်တစ်ဦးပါပေးပါ
5 ကနေကွဲပြား session တစ်ခုကြာချိန်အတွက်သင်၏အကျင့်
အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှုမှ Adjust - ။ သင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကို fit မှ 70 မိနစ်နှင့်7ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် (အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, စပိန်, တရုတ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်) ဖြစ်ကြသည်။ မျက်စိ strain ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အကူအညီတောင်းဖို့အမှောင် Mode ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
အမျိုးမျိုးသော devices များအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာ
သင့် Activity ကိုခြေရာခံ App ကိုအတွက်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ။ အဆိုပါစမတ်နာရီနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကြာချိန်နှင့်ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကွင်းအထောက်အကူပြုနှင့်သင်၏နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့
သငျသညျကိုတပ်ဆင်ရန် update ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်နေစဉ်, ဒီလွယ်ကူသောဝမ်းဗိုက်အသက်ရှူကြိုးစားကြ: သင့်ရဲ့ core ကိုတည်ငြိမ်အောင်အူသင့်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ဆွဲပါ။ သငျသညျဝမျးများ၏ရှေ့မှောက်၌မထိရန်သင့်လက်ချောင်းထိပ်ကိုဆောင် ခဲ့. , ရှူအဖြစ်။ သငျသညျ exhale သကဲ့သို့, နှစ်ဖက်မှသင်၏လက်ကိုထုတ်ဖွင့်လှစ်။ အနာဂတ်မှာမွှန်, အတိတ် exhale ။ ကပျော်စရာရှိသည်!
Instagram ကို: @DailyYogaApp
Facebook မှ: facebook.com
ပို. ပင် http://www.dailyyoga.com
ဆက်သွယ်ရန်မှာထွက်ရှာမည် / DailyYogaApp
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: of Service ကို http://www.dailyyoga.com/privacy.html
-------------------------------------------------- --- "ထိပ်တန်းရေးသားသူ" "Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်", "Clear ကိုသင့်ရဲ့စိတ်, သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲဆောင်ပါ" 🏆Featured
အဖြစ်, Google Play စမှာ "တည်ငြိမ်သော & Carry တွင် Keep", Glosbe "အကောင်းဆုံးယောဂအဖြစ်မဲပေး Healthline.🏆
အားဖြင့်တစ်နှစ် 2016-2020 ၏ App ကို "(https://www.healthline.com/health/fitness-exercise/top-yoga-iphone-android-apps)
ဘာအသစ်လဲ Daily Yoga | Fitness Yoga Plan&Meditation App 8.04.10